crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Suuqa Saddex-xagalka iyo Sallada Qudaarta | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka November 16, 2015	0 1,317 Views
Muqdisho (Himilonews) – Aragtida ganacsiga Suuqyada waaweyn ee maanta ugu caansan magaalada Muqdisho sida Bakaaraha iyo Suuq-Bacaad—markaad muggooda iyo muuqaalkooda ku dheygagto—ha qaayibin inay jiilka maanta ah ku da’aad yihiin. Micno malahan intay ballaar iyo baaxad isku darsadeen—ama ay tiigsimaad u noqdeen bulshada Soomaaliyeed.
Hadaba, Himilonews.com, waxay kugu soo dhaweyneysaa daawashada sawiradii ugu danbeeyey ee laga soo qaaday qeybta qudaarta ee suuqa Siinaay. Dad badan oo carabka dibnaha ku leefaya—markay arkaan qudaarta qaar sida Canbaha, Isbaandheyska iyo Dhangalowga—waxaa un kaliya ka xigta inay halhaleel usoo gaaraan suuqa Siinaay si nimcada Ilaahay noogu deeqay aanay uga qadin.
Previous: Shan walxood oo Swizerland ku caan tahay
Next: Biya-dageenka Xareed: gargaar gurmad u baahday!